Dadaalo nabadeed oo ka soconaya Qardho ka dib dilka 5 qof & xiisad ka dhalatey – SBC
Dadaalo nabadeed oo ka soconaya Qardho ka dib dilka 5 qof & xiisad ka dhalatey
Ka dib markii maanta magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar dil loogu geystey 5 nin ayaa waxaa haatan soconaya dadaalo nabadeed oo ay wadaan siyaasiyiin, waxgarad & xubno ka mid ah maamulka Puntland.
Magaalada Qardho ayaa waxaa haatan gaaray xubno uu ka mid yahay Madaxweynihii hore ee Puntland Gen. Cade Muuse, iyadoo sidoo kale xubno ka socda maamulka Puntland ay tageen si ay u qaboojiyaan xiisada ka dhalatey dilkii maanta dhacay.
Waxgaradka & siyaasiyiinta socdaalka ku tagey magaalada & waliba dhinacyo kale oo nabad jire ah ayaa kulamo kala duwan la qaatey waxgaradka & cuqaasha dhinacyada ay khuseyso dhacdada dilkii maanta uu ka dhashay, waxaana ay ka dalbadey waxgaradka labada beelood ee mashaqadan ka dhex dhacdey inaanay dib dambe u qaadin wax talaabo ah oo laga fogaado colaad ama dhiig dambe oo qubta.
Xaalada magaalada Qardho ayaa maanta gashay jawi colaadeed ka dib markii si barer ah toogasho loogu geystey shan nin oo ka mid ah dadka deegaanka ka soo jeeda, kuwaasi oo loo dilay hayb qabiil.
Koox maleeshiyo ah oo daba joogtey dil horey uga dhacay duleedka magaalada Qardho ayaa dilay shanta qof oo la sheegay inay isku hayb ahaayeen Taliyhii saldhiga magaalada Qardho Marxuum Muuse Dhuqub, dilkaasi oo yimid ka dib markii iska horimaad uu ka dhacay Isbaaro ay dhigteen maleeshiyo & ciidamo uu watey taliyahasi, waxaana weerarkaasi ku dhintey 3 nin oo ka mid ahaa kooxdii isbaarada dhigatey.
Dadkii ku dhintey weerarkii maanta ayaa kala ahaa Maxamed Maxamuud Bile (Bile Heenseeye), Raage Sirqo,Maxamed Gurey Casayr, Maxamed Dhalawas & Boolo Shire Hiirad.
Dadka la diley & maleeshiyada weerarka dilka ah geysatey ayaa dhamaantood ka soo wada jeeda Beesha Cismaan Maxamuud, waxaana dilkan uu ku soo aadayaa iyadoo deegaankaasi ay ka soconayaan wadahadalo nabadeed oo u dhaxeeya Beesha Cismaan Maxamuud & Dubeys.